Samsung waxay xireysaa rubuca hore ee 2019 natiijooyin liita | Androidsis
Samsung waxay sanadka ku bilaabataa hoos u dhac weyn oo xagga macaashka ah
Eder Ferreno | | Noticias, Samsung
Rubuca hore ee sanadka badanaa waa kuwa ugu xun noocyada badankood ee ku saabsan Android. Iibintooda ayaa ka liidata natiijooyinka guud ahaanna ma ahan kuwa ugu fiican. Waan awoodnay inaan isaga la aragnoiibkii xumaa ee Sony soo maray. Laakiin waxyaabo aad ugama fiicnayn Samsung sidoo kale. Calaamadda Kuuriya ayaa ku bilaabatay sanadka sida ugu xun ee ugu macquulsan.
Tan iyo markii Samsung waxay kubilaabaneysaa 2019 natiijooyinka liita ee wareega koowaad. Toddobaadyo ayaa laga digayay in natiijooyinka shirkadda ay noqonayso kuwo taban. Xaaladdan oo kale, iibin liidata oo ka socota qaybta semiconductor ayaa ka caawisay hoos u dhacan. Marka faa iidada shirkadu waxay hoos udhacdaa 60%.
Sanadkii la soo dhaafay noocyada semiconductors-ka waxay u dhaqmeen sidii nooc barkin ah oo shirkadda Kuuriya laga leeyahay. Inkasta oo markan, ayaa sheegay in joodarigu uusan sii jirin, maxaa yeelay waxay sidoo kale leeyihiin natiijooyin xun qaybtaan. Sababta oo ah, inkastoo xaqiiqda ah in Galaxy S10 ay leedahay dalab adag suuqa, qaybta taleefanka ee Samsung sidoo kale way dhacdaa.
Samsung waxay ku shaqeyn laheyd adeegiisa daruuriga ah
Sida la bartay, taleefannada casriga ah iyo qaybta IT-gu waxay sannadka ku bilaabmaan hoos u dhac 40% ah ee macaashkaaga, marka loo barbardhigo isla muddadii kal hore. In kasta oo hoos u dhaca ku yimid iibinta qaybtani ay aad u yar tahay, sidii horeba loogu yiqiin mahadnaqa tirooyinka ay shirkaddu wadaagtay. Dhibaatadu waxay tahay hoos u dhaca ku yimaadda farqiga faa iidada ee soo food saartay shirkadda Kuuriya.
Munaasabaddan, xogta iibka ee rubuca hore ee 2019 waxay muujineysaa in Samsung ay heshay iibyo qiimihiisu yahay 27,2 trillion Kuuriya oo guuleysatay. Tani waa waxoogaa hoos u dhac ah marka loo eego sanadkii hore, si dhib yar 5%. Tani lafteeda lafteeda maahan wax walaac leh, maadaama aysan ahayn hoos u dhac weyn. Waa farqiga faa iidada ee aan soo sheegnay oo si weyn hoos ugu dhacay.
Tan iyo markii iibinta qaybtan taleefannada casriga ahi hoos u dhacdo, laakiin aan aad u badnayn, kaliya 5%. Laakiin macaashka qaybtan shirkaddu si weyn hoos ugu dhacday. Waxay hoos udhaceen ku dhowaad 40% ilaa 1,5 trillion ayaa guuleystey.. Tani waa xaqiiqo abuureysa walaac shirkadda, dabcan. In kasta oo Galaxy S10 ay ilaa hadda leeyihiin a soo dhaweyn wanaagsan oo suuqa ah shirkaddana rajo weyn ayey ka qabtaa iyaga.
Xaqiiqdii, dalabka wanaagsan ee Samsung Galaxy S10 ay hayaan waa war wanaagsan shirkadda, qayb ahaan. Maaddaama ay ka caawineyso inay ka soo kabsadaan xoogaa dhul ah, marka loo eego rubucii hore. In kasta oo ay tahay inaad maskaxda ku hayso in iibinta taleefanku guud ahaan hoos u dhacayaan, iyon 2018 waxay ku dhaceen suuqa guud ahaan. Intaa waxaa dheer, shirkaddu sidoo kale waa inay tixgelisaa inay la kulantay kharashyo muhiim ah.
Bilahaan ugu horeeya sanadka 2019, Samsung wuxuu noo reebay laba taleefoon oo cusub. Dhinac, the Telefoonada kala duwan ee Galaxy J, Si loo helo waddo loogu talagalay kala duwanaanshaha Galaxy A. Qoys cusub oo taleefanno ah ayaa sidoo kale la sameeyay, taas oo ah tan lee Galaxy M taas oo hadda loo bilaabay suuqa Hindiya oo ah ujeedo weyn. Sidaa darteed, dib-u-habeynta nidaamyadooda ayaa ah wax sidoo kale lacag ku baxay.
Ma aha oo kaliya dib u habeynta khadadka laftiisa, laakiin sidoo kale soo saarida taleefannada cusub. Sidoo kale kharashka lagu kordhiyay hagaajinta moodelladan, naqshadaha cusub iyo ololayaasha suuqgeynta in shirkaddu ay fulisay si kor loogu qaado moodooyinkaas. Dhammaantood waa kharashyo ay ahayd inay shirkaddu gasho rubuc-kooda hore. In kasta oo la filan karo in ay waqtiga ku yaraanayaan.
Wali, Samsung waxay u maleyneysaa in rubuca labaad ee sanadkan uu ka fiicnaan doono. Xaqiiqdii, shirkaddu waxay rajeyneysaa kororka baahida rubuckan labaad ee sanadka. Waxaa jira dhowr nooc oo ay u arkaan inay kobcin karaan iibintooda, sida Galaxy S10 5G ama Galaxy A80, moodallo hal abuur leh oo wax cusub soo bandhiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung waxay sanadka ku bilaabataa hoos u dhac weyn oo xagga macaashka ah
Redmi oo leh Snapdragon 855 ayaa soo bixi kara iyada oo aan la helin shaashadda sawirka faraha